ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (56) Michael Jackson ဦးနှောက် မိသားစုမှ ပြန်လည်လက်ခံရရှိ
ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ်
(56) Michael Jackson ဦးနှောက် မိသားစုမှ ပြန်လည်လက်ခံရရှိ
King of pop ဖြစ်တဲ့ Michael Jackson ရဲ့ ဦးနှောက် ကို မိသားစုမှ ဒီနေ့ ပြန်လည် လက်ခံရရှိတယ်လို့ သတင်းထဲမှာဖတ်ရပါတယ်။ သူအိမ်ထဲ က သွေးစွန်းနေတဲ့label မဖြုတ်ရသေးတဲ့အမျိုးသမီး blouse ကို ရဲတွေက ရှာဖွေပုံစုံနဲ့ သိမ်းတဲ့ ထဲမှာပါမသွားပါဘူး။
King of pop ရဲ့you are not alone ဆိုတဲ့ စာသား ကို ကျမစွဲနေပါတယ်။ သူသီချင်းတွေ ဟာ အင်မတန်ကောင်းပြီး သူ ဘ၀က စိတ်ဝင်စားစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ မာန်မာန ကင်းပြီး ၊ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတော်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့child abuse ဆိုတာဟာ လဲ ငွေသိုက်တူးသူ တချို့ ရဲ့ အပုတ်ချမှု့ လို့ အများက ယူဆကြပါတယ်။ သူရဲ့ moon walk ကို ကျမ try ပြီးလျှောက်ကြည့်တာ အဆင်မပြေပါဘူး။
သင်္ခါရ တရားကို သင်ပေးတဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ငါသည်မုချသေရမည်။ အချိန်ပိုင်းသာ ကျန်တော့သည်။ အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးရမည်။
Posted by ရိုးရိုး at Saturday, August 08, 2009
ဥစ္စာပျောက် ငရဲရောက် - ပစ္စည်း တစ်ခုခု ပျောက်ရင် ကိုယ့် ဘာသာ အသုံးမကျလို့တနေရာရာမှာ ကျပျောက်ခဲ့တာ မျိုးက ကိစ္စ မရှိပေမဲ့ ၊ အခိုးခံ လိုက်ရတာ ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်းလဲ အခိုးခံ ရတယ် ငရဲလဲ...
အငြိမ်းစား စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နာရီ အတန်ကြာ တွေ့ ဆုံ - ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဖြစ် သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်း ရွှေ နှင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက် ပွဲ အနိုင်ရ NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အော...
The Avant-garde of Tennis Apparel: Rafael Nadal (part2of 2) - http://cakra-app.com It’s more than just the choice of clothing. It has more to do with how Rafa exudes confidence wearing practically anything. It’s like ...
အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံသာမြင့်က ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးပါရန် စာဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ - စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့စွဲဖြင့် Reuters သတင်းဌာနမှ Mr. Paul Mooney ရေးသားသော သတင်း (With Suu Kyi Blocked, Myanmar's NLD Eyes Former General for President ) ...
Treadmill Benefits - There may be lots of new exercise machines nowadays but one that remains highly useful and beneficial through the years is the treadmill. It’samachine th...
မြန်မာ့ခရီးသွားတိုးတက်ရေး အကူအညီရဖို့ အလားအလာကောင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် (ဓာတ်ပုံ - ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း) V OA| မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေးအတွက...
Strange Burma News
Happy Burmese New Year - Wish you all the best in the Burmese New Year. May all the Burmese people around the world have many new and interesting paths to take, good fortune, heal...
MMDailyNews - Home
Democratic Voice of Burma: News Front Page (Burmese)
Burma News International | Burmese Version
The New Era Journal
(65) NO NO NO NO FROM MISS NICE
(64) NEWBORN ကြွက်ညိုလေး ARRIVAL
(63) ဒုက္ခပေးတဲ့ Cholesterol
(60) CAN OPPOSITE SEX PEOPLE BE BEST FRIENDS WITH ...
(59) ANNOYING PEOPLE လူညစ်တွေကြောင့်စိတ်ပျက်မှု မျ...
(58) THE POWER OF FRIENDSHIP
(57) HAY FEVER & ASTHMA
(56) Michael Jackson ဦးနှောက် မိသားစုမှ ပြန်လည်လက...
(55) ရှစ်လေးလုံး ရရင်ရ၊မရရင်ချ ရရ မရရ ချ
(54) CHESS TITANS MAKE ME SICK စစ်တုရင် ရောဂါ
(53) TO MY LOVELY SON
(52) My amazing body
English post (56)
My interest (130)
Politic and news (36)
ချစ်သူသာ ပန်မယ်ဆို ရင်၊
တောင်အနှံမှာ မောင်ခြေဆန့် ကာ